ဒီနေ့ည မော်ရင်ဟိုနဲ့ဆိုးလ်ရှား ဘယ်သူသာမလဲဆိုတာကို ပြသမယ့် မန်ယူနဲ့စပါးပွဲ ဘယ်အသင်းနိုင်မှာလဲ? – Khit Lunge
ဒီနေ့ည မော်ရင်ဟိုနဲ့ဆိုးလ်ရှား ဘယ်သူသာမလဲဆိုတာကို ပြသမယ့် မန်ယူနဲ့စပါးပွဲ ဘယ်အသင်းနိုင်မှာလဲ?
ဘောလုံးပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဒီနေ့ညမှာရှိပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ မနက် 2နာရီမှာ ကျင်းပမယ့် မန်ယူနဲ့စပါးအသင်းတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဟာ ကစားသမားတွေ၊ပရိသတ်တွေအတွက်သာမက နည်းပြနှစ်ယောက်အတွက်လည်း အရေးကြီးတဲ့ပွဲပါ။ မော်ရင်ဟိုနဲ့ဆိုးလ်ရှားတို့အတွက် မှတ်တမ်း တစ်ခုဖြစ်စေမယ့် ဒီပွဲမှာတော့ မန်ယူကစားသမား အန်သိုနီမာရှယ်တစ်ယောက်ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အက်စ်တွန်ဗီလာနဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲမှာတော့ မန်ယူအသင်းဟာ သရေရလဒ်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုရင်ဆိုင်ရမယ့်အသင်း ကတော့ မန်ယူနည်းပြဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့မော်ရင်ဟိုကိုင်တွယ်နေတဲ့စပါးအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားတစ်ယောက်အထုတ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားနေရာကို ပိုချက်တီနို၊ အလ်လီဂရီ၊ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာစ်းတို့ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာ မန်ယူအနေနဲ့ အနိုင်ရရှိမှုနှုန်းဟာ 30 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်သာရှိနေပါ တယ်။ ပိုချက်တီနို၊ အူနိုင်းအမ်မရီတို့ရဲ့နောက်ကို ဆိုးလ်ရှားလိုက်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
နည်းပြမော်ရင်ဟိုကတော့ သူ့အနေနဲ့ မန်ယူအသင်းကနေထွက်ခဲ့ရပေမယ့် မန်ယူဟာသူ့အတွက်ရန်သူမဟုတ် ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုဟာ မန်ယူအသင်းကို နှစ်ရာသီခွဲလောက်တာဝန်ယူဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူ့မှာမန်ယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေများစွာရှိပြီး၊ ဒါကပဲစပါးအတွက် အားသာချက်တွေဖြစ်စေနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
“လက်ရှိမှာကျွန်တော်က မန်ယူကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ရမယ့် နည်းပြဖြစ်ပြီးတော့ ဆိုးလ်ရှားကတော့ မန်ယူဘက်ကနေ အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားရမယ့်နည်းပြပါ။ မန်ယူပရိသတ်တွေကတော့ ကျွန်တော့်ကိုအားပေးကြမှာမဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒါဟာဘဝပါပဲ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ မန်ယူကိုအနိုင်ရအောင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်”လို့ နည်းပြမော်ရင်ဟိုကပြောပါ တယ်။ မန်ယူဘက်ကတော့ အခုစပါးပွဲအတွက် လူစာရင်းကို ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်မှာ သုံးခဲ့တဲ့ လူစာရင်းအတိုင်း သုံးမယ်လို့သတင်းထွက်နေသလို၊ ဗဟိုခံစစ်ကစားသမား 3ယောက်အထိလည်းသုံးမယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ ဘယ်နည်းပြကပိုသာမလဲဆိုတာ မကြာခင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ရော ဘယ်အသင်းနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ။Via – 90minute
ဘောလုံးပရိသတျတှစေောငျ့ကွညျ့သငျ့တဲ့ ပှဲကောငျးတဈပှဲဒီနညေ့မှာရှိပါတယျ။ ကွာသပတေးနေ့ မနကျ 2နာရီမှာ ကငျြးပမယျ့ မနျယူနဲ့စပါးအသငျးတို့ရဲ့ပွိုငျပှဲဟာ ကစားသမားတှေ၊ပရိသတျတှအေတှကျသာမက နညျးပွနှဈယောကျအတှကျလညျး အရေးကွီးတဲ့ပှဲပါ။ မျောရငျဟိုနဲ့ဆိုးလျရှားတို့အတှကျ မှတျတမျး တဈခုဖွဈစမေယျ့ ဒီပှဲမှာတော့ မနျယူကစားသမား အနျသိုနီမာရှယျတဈယောကျပါဝငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အကျဈတှနျဗီလာနဲ့ပှဲမှာ ဒဏျရာရရှိသှားခဲ့တာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေပှေဲ့မှာတော့ မနျယူအသငျးဟာ သရရေလဒျသာရရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုရငျဆိုငျရမယျ့အသငျး ကတော့ မနျယူနညျးပွဟောငျးဖွဈခဲ့ဖူးတဲ့မျောရငျဟိုကိုငျတှယျနတေဲ့စပါးအသငျးဖွဈပါတယျ။ တဈဖကျမှာလညျး နညျးပွဆိုးလျရှားတဈယောကျအထုတျခံရနိုငျဖှယျရှိတဲ့သတငျးတှထှေကျနပေါတယျ။ ဆိုးလျရှားနရောကို ပိုခကျြတီနို၊ အလျလီဂရီ၊ ဘရနျဒနျရျောဂြာဈးတို့ရောကျလာနိုငျတယျဆိုပွီးသတငျးတှထှေကျနပေါတယျ။ ဆိုးလျရှားလကျထကျမှာ မနျယူအနနေဲ့ အနိုငျရရှိမှုနှုနျးဟာ 30 ရာခိုငျနှုနျးဝနျးကငျြသာရှိနပေါ တယျ။ ပိုခကျြတီနို၊ အူနိုငျးအမျမရီတို့ရဲ့နောကျကို ဆိုးလျရှားလိုကျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။
နညျးပွမျောရငျဟိုကတော့ သူ့အနနေဲ့ မနျယူအသငျးကနထှေကျခဲ့ရပမေယျ့ မနျယူဟာသူ့အတှကျရနျသူမဟုတျ ကွောငျးပွောဆိုထားပါတယျ။ မျောရငျဟိုဟာ မနျယူအသငျးကို နှဈရာသီခှဲလောကျတာဝနျယူဖူးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့သူ့မှာမနျယူနဲ့ပတျသကျတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှမြေားစှာရှိပွီး၊ ဒါကပဲစပါးအတှကျ အားသာခကျြတှဖွေဈစနေိုငျမလားဆိုတာစောငျ့ကွညျ့ရပါမယျ။
“လကျရှိမှာကြှနျတျောက မနျယူကိုအနိုငျရအောငျလုပျရမယျ့ နညျးပွဖွဈပွီးတော့ ဆိုးလျရှားကတော့ မနျယူဘကျကနေ အနိုငျရဖို့ကွိုးစားရမယျ့နညျးပွပါ။ မနျယူပရိသတျတှကေတော့ ကြှနျတျော့ကိုအားပေးကွမှာမဟုတျပါ ဘူး။ ဒါဟာဘဝပါပဲ။ ကြှနျတျောအနနေဲ့ကတော့ မနျယူကိုအနိုငျရအောငျပွငျဆငျနပေါတယျ”လို့ နညျးပွမျောရငျဟိုကပွောပါ တယျ။ မနျယူဘကျကတော့ အခုစပါးပှဲအတှကျ လူစာရငျးကို ရှကျဖီးယူနိုကျတကျမှာ သုံးခဲ့တဲ့ လူစာရငျးအတိုငျး သုံးမယျလို့သတငျးထှကျနသေလို၊ ဗဟိုခံစဈကစားသမား 3ယောကျအထိလညျးသုံးမယျလို့ သတငျးထှကျနပေါတယျ။ ဘယျနညျးပွကပိုသာမလဲဆိုတာ မကွာခငျတှရေ့တော့မှာပါ။ ပရိသတျတှအေနနေဲ့ရော ဘယျအသငျးနိုငျမယျထငျပါသလဲ။Via – 90minute